Home » Featured » Ny Encoder an'ny VITEC Compact Hardware Encoder dia mamela ny fampielezam-peo handefa horonantsary kalitao HD / SD
Ny Encoder an'ny VITEC Compact Hardware Encoder dia mamela ny fampielezam-peo handefa horonantsary kalitao HD / SD
Hatramin'ny 1988, VITEC dia mpitarika eran'izao tontolo izao eo amin'ny sehatry ny famaranana horonantsary farany. Nandritra ny telopolo taona mahery, ny orinasa dia mpamatsy fandaharana amin'ny fampielezam-baovao, miaramila sy governemanta, orinasa, fanatanjahan-tena sy toerana fialamboly ary trano ivavahana. VITEC ny H.265 (HEVC) sy ny fanomezana H.264 dia be midadasika indrindra eny an-tsena miaraka amin'ny fitaovam-panodinana sy fanodinana. IPTV vahaolana ho an'ny Desktops sy ny fitaovana finday, karatra sy ny PCI amin'ny SDK noho ny fampidirana tetikasa. VITEC ny Ny vahaolana an-tsary nomerika intuitive dia azo ampifanarahana amin'ny filàn'ny mpanjifa tsy manam-paharoa. Manolotra teknolojia mora ampiasaina izy ireo izay miantoka ny kalitao avo lenta sy ambany HD horonan-tsary, fakana sary mivantana sy voarakitra ho an'ny fizarana seamless ao anaty endrika maro isan-karazany, na aiza na aiza, amin'ny fitaovana rehetra. Ary ny Compact HEVC & H.264 Hardware Encoder, MGW Ace tsy misy hafa.
VITEC's MGW Ace no encoder fitaovana H.265 / H.264 voalohany manerantany amin'ny fitaovana matihanina, ambany dian-tongotra, fitaovana mandeha mivantana. Ity encoder ity dia manana famindrana fitaovana HEVC 100% amin'ny fotoana tena izy, izay ahafahan'ny mpampiasa mandefa horonantsary 1080p kalitaon'ny fampielezam-peo miaraka amin'ny tahiry bandwidth hatramin'ny 50% raha oharina amin'ny fenitra H.264 ankehitriny. The MGW Ace dia ampiasain'ny VITEC HEVC GEN2 + encoder, ary ny codec ankehitriny dia manohana ny fampidinana an-tariby Ultra-Low Latency (ULL) ao amin'ny HEVC ho an'ny fahitana fitaratra-vera ambany hatramin'ny 65ms.
fampitana injeniera fampitana Engineering fahitalavitra Compact HEVC & H.264 Hardware Encoder fandraisana anjara vahaolana famaranana horonantsary farany voalohany encoder H.265 / H.264 Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor Teknolojia mampidera HEVC Kalitao HEVC kalitao fampidirana IPTV solutions isovideo, viarte, HDR, tabataba fampihenana, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC, 2015, bitrate fampihenana, immersive, UHD / 4K / HD, H264 / H265, Warsaw MGW Ace SoftAtHome, MStar, CES2017 Telo sy zana-tsipìka Ultra HD Forum Video injeniera votoaty hita maso Vitec 2020-05-04
Previous: HuddleCamHD dia nandefa WebK 4K vaovao afaka miditra!